Wasiirka madaxtooyada oo dhawaan aqal dowladeed ka iibsaday qoys reer Samatar ah by Abdi Mustafe
Wasiirka madaxtooyada Maxamoud Xaashi ayaa iibsaday guri dowladeed oo ay ku jireen qoys reer Samatar ah oo ku yaala meel u dhow aqalka la odhan jiray State House. Maxamoud Xaashi oo heerka u musuq maasuqu ka gaadhay weli xukuma madaarka Hargiesa oo lacag badani isaga iyo marwada uuga soo xarooto oo acoount gooniya ay uugu dhacdo ayaa laba wasiir kaga bedelay markay sua'alo ka keeneen lacagaha sida gaarka ah madaarka uuga socda wasiirka madaxtooyada iyo marwada madaxweynaha.
isaga oo lacagta uu lunsaday lagu sheego inay taahay 8 million oo dollar oo baanan Dubai ku yaala uu kku qarsado ayaa wiigii hore waxa soo dirtay marwada madaxeynaha oo ku tidhi iiga saara oo ii soo iibiya guriga ay ku jiraan agoontii uu ka dhintay Abdirahmana Maxmaed Ducale ee Banka dhexe heysan jiray. Waxa kale oo jira in Amina Weris qudheedo ay haysato guri dowladeed oo ku yaala afaafka laga galo halka uu ku yaalo guriga State House ku oo ay iyada iyo Silaanyo iibsadeen markii dalka lagu soo noqday. Waxa kale oo la wada ogyay inay 500 kor u dhaafeen guryaha dowlada ee dad shicib ihi ku jiraan oo laga iibiyey. Hadaba Amina Weris maxaa deeqa?? Wadan dhan bay dekediisii iyo madaarkiisii iyo guryihiisii iyo dhulkiisii ay xaraashtay. Marnaba marwadu sidan ay wax u wadaa caadi maaha ee ma la hubaa inay fayowday. Waxa laga dheregsanyay Amina Weris tay ku dhigtay walaal keed Cali Jirde oo soo koriyey inay isaga oo nool xoolihiisii damaaciday oo ay maxkamada Hargiesa ay ka ash-kateysay iyadoo ku dacwiyeysa in uu asaasaqay hase yeeshee markuu qaadigii maxkamada Cali la hadlay wuxuu cadeeyey in aannu waxba qabin dabeed halkii bay Amina ku khasowday kana huleeshay. markii uu dhintay waxay wada iibisay xoolihiisii oo dhan dadkii dhaxalka wax ku lahaana badan koodii dhabarka ayay u jeedisay. Fooqii Cali Jirde ee ay hudheelka ka dhigatay qasab bay ku heysataa oo wey diiday in la dhaxlo. Amina Weris Somaliland iyo qoyska ay ka soo jeedaba wax xil le ayay ku samaysay laakiin sua'ashu waxa weeye halkay ku noolaan marka ay xilka ka degto sow reer Jirde oo dhan oo cadho u diglihi soo doonan maayaan dhaxal koodii oo maxkamada geyn maayaan sidii ay waal keed u geysay.What goes around comes around. Isku soo xoori oo qofkii xoolihii ummada dhacay waxa hubaal ah isagoo nolosha ku goo goa'y in shicibku daawan doonaan. Taariikhda aduunka ayaa sidaa dhigeysa diinta islaam kuna way til maantay. Agoomaha ilaahay baa ilaashada oo madaxtooyadu ma mahadin doonto haday aqalka dibada uuga tuuraan oo loo wer-weri maayo.
More in this category: « Shicibku wuxuu ogaa 35% Somaliland, 65% DP World goormaa Ethiopia la siiyey19% by Abdi Mustafe Madaxweyne Siilaanyo, Intuu Kursiga ku fadhiyey Somaliland dhinac Kasta Gude & Debedba wey ka soo oodantay »